सचिवज्यू ! फेसबुकमा आर्दशको ‘गफ जोत्न’ लाज लाग्दैन ? – YesKathmandu.com
कर्मचारीहरु आफ्नो बढूवाका लागि नेताका घर दैलो चर्हान्छन भन्ने त सुनिएकै हो । तर ‘म जहाँ/जे छु यसैमा थमौती पाँउ’ भन्दै शक्तिकेन्द्रमा धाउने कर्मचारी पनि भेटिए भने अचम्म नमाने हुन्छ ।
यस्तो विरलै देख्न पाइने दृश्य देखिन्छ साना शहरी खानेपानी आयोजनामा । त्यहाँका अयोजना प्रमुख हुन रामचन्द्र साह । खानेपानी मन्त्रालयमा रहेका १७ फष्ट क्लास अफिसरमध्य सिनियरारिटीको आधारमा उनी पाँचौ क्रममा छन । सिनियरका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका रामचन्द्र देवकोटा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख छन । खानेपानी विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्ट दोश्रो,राजन पाण्डे तेश्रो स्थानमा छन । पाण्डे मन्त्रालयका सह सचिव रही हालै मात्र राजनीतिक आस्था नमिल्दा सुदुरपश्चिममा पोष्टिङ गरिएको छ । उनलाई क्षत्रीय खानेपानी निर्देशनालयको निर्देशकको रुपमा त्यता पठाइए पनि उनी बरु जागिर छोड्ने तर सुदुरपश्चिम नजाने अड्डीमा छन । चौथो पोजिसनमा रहेका सुनिल कुमार दास खानेपानी विभागका उप महानिर्देशकको रुपमा कार्यरत छन भने पाँचौमा पर्दछन साह ।
साहलाई आयोजनाबाट खानेपानी विभागको उप महानिर्देशकमा रुपमा ल्याउन खोजिएको थियो । यद्यपि असार महिनाभरी यही प्रोजेक्टमा बसेर खोलो फड्को गर्ने उदेश्य अनुरुप उनले सोही ठाँउमा थमौती मागे । पोष्टिङ गर्न खोजिएकोमा मलाई पोष्टिङ नगर्नुहोस यही ठाँउमा थमौती दिनुहोस भन्दै उनले शक्तिकेन्द्र मात्र धाएनन् आफ्नो मिसन पनि सफल गराई छाडे । उनले असारसम्म त्यही टिक्ने अस्त्रका रुपमा राज्यमन्त्री दीपक खड्कालाई गाडि टक्राए अयोजनाको ।
राज्यमन्त्री खड्कालाई चाकडी स्वरुप टक्राइएको बा १ झ १५४९ नम्बर प्लेट भएको आयोजनाको सो गाडि मनत्री पद्बाट खुस्एिको दुई साता बितिसक्दा समेत राज्यमन्त्री खड्काले फिर्ता गरेका छैनन बरु आयोजनाको नम्बर प्लेटलाई उत्काएर रातो नम्बर प्लेट हालेर अहिले सो गाडि संखुवासभातिर दौडिरहेको छ । उनी सो गाडि लिएर अहिले गृहजिल्ला संखुवासभामा चुनाव प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन । मन्त्रालय र मातहतका अड्डामा यस्तो गाइजात्रा हुँदा यस्को कमाण्ड सम्हालि रहेका र आगामी भाद्रमा अवकाश हुने सचिव भीम उपाध्याय फेसबुकमा आर्दशका गफ जोत्दै यता भने लाचारी देखाँउदै अषाढ मसान्तको तर मार्ने चालमा छन ।
त्यहाँ पाँचौ रोलका साह नआइदिँदा उनीभन्दा धेरै जुनियर दशौं पोजिसनको मीना कुमारी श्रेष्ठलाई सो स्थानमा चिठ्ठा परेको छ । मीनालाई डिडिजि बनाएर त्यता लगिएको छ । मन्त्रालयको इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना त्यही देख्न पाइन्छ । सबैभन्दा जुनियर सुह सचिवहरुलाई सबैभन्दा बरिष्ठ सह सचिव बस्ने सह सचिव बस्ने मन्त्रालयमा लगेर जग हसाई गरिएको छ ।
सबैभन्दा जुनियर १६ र औं १७ पोजिसनमा रहेका आशिष घिमिरे अनिलभद्र खनाललाई मन्त्रालयमा सबैभन्दा सिनियर सहसचिवहरु बस्नु पर्ने खानेपानी महाशाखा र योजना माहाशाखामा पुर्याइएको छ । कहिँ नभएको गाइजात्रा सिंहदरवारमा । यस्तो जात्रा र वेथिती हेर्न पर जानै पर्दैन सामाजिक सञ्जालमा आर्दशका गफ जोतेर कहिले नथाक्ने सचिव भीम उपाध्यायलाई हेरे पुग्छ । उनी कतिसम्म ढोंगी छन र मेलम्ची आयोजना प्रति कतिको जिम्मेवार छन भन्ने दृष्टान्तका लागि यही एउटा पछिल्लो तथ्य काफी हुन्छ ।
मेलम्ची जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हाल दीर्घरोगका अस्वस्थ रहेका जनक कुमार अधिकारीलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उपकार्यकारी निर्देशक जस्तो जिम्बेवार पदमा खटाइएको छ ।
सचिवले राजनीतिक दलका नेताहरुकै शैलीमा दशै अगाडि नै मेलम्ची खानेपानी खुवाइन्छ भनेर दैनिक जसो स्टाटटस लेखे पनि आयोजना सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सुरुङ खन्न मात्र अझै सात महिना लाग्छ ।
अस्तिको मितिसम्म तीन किमी खन्न बाँकी छ । मेलम्ची आयोजनामा खटिएका प्राविधिकहरुका अनुसार सरदरमा दैनिक १८ मिटर खनिन्छ । यो हिसाबले सुरुङ खन्न मात्र १६७ दिन अर्थात झण्डै ६ महिना लाग्ने देखिन्छ तर सचिव उपाध्याय कुनै राजनीतिक अमुक नेताकै शैलीमा दैनिक फेसबुक र टिव्टरमा स्टाटस लेख्छन मेलम्ची आयोजना दशै भित्रमा राजधानीबासीले पिउन पाउछन । एउटा प्राविधिक सचिवले राजनीतिक दलका नेताहरुले जस्तो झूठो कुरा बोलेको कस्तो नसुहाएको ?
जनकपुरमा बाबुरामलाई स्वागत गर्न पुगे गुप्ता
भारतले वीरगन्जमा सीमा मिचेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
पहिरोमा एकै घरका तीनको मृत्यु